Accueil > Gazetin'ny nosy > Depiote Nicolas: “Iray volana no iandrasana ny fanovany ny governemanta”
Depiote Nicolas: “Iray volana no iandrasana ny fanovany ny governemanta”
Mbola nitazona ny heviny hatramin’izao ihany ingahy depiote Jean Nicolas Randrianasolo izay voafidy any amin’ny distrikan’i Betroka. Mitaky ny hanovana ny mpikambana maro ao amin’ny governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier izy sy ny namany raha ny voalazany omaly talata faha 14 novambra 2017, tetsy amin’ny lapan’ny Antenimieram-pirenena atsy Tsimbazaza. Voalazany fa HVM (Hery vaovaon’i Madagasikara) ny vondrona parlemantera misy azy, ary niady mafy tokoa ny tenany ny hametrahana izao repoblika fahefatra izao sy ingahy Hery Rajaonarimampianina eo amin’ny toerany. Noho izany dia tsy hanaiky velively ny olona izay hitany fa hamadika sy hamitaka izao fanjakana izao izy. Izany no antony nanangonany sonia amin’izao fotoana izao izay efa miisa 39 no nanaiky amin’ireo depiote ao Tsimbazaza ny hametrahana ny fitsipaham-pitokisana.
Ny volana desambra ity no fe-potoana farany angatahina amin’ingahy Hery Rajaonarimampianina hanala ireo olona tsy mahavita azy ao amin’ny governemanta tao an’i Onitiana Realy izay minisitra ny Mponina sy ny Mamy Lalatiana Andriamanarivo izay minisitra ny Fahasalamana ary ny hafa koa hoy ihany ity depiote ity.
Raha tsiahivina ny tenin’ingahy Jean Nicolas Randrianasolo izay mpikambana eo anivon’ny antoko Mapar (Miaraka amin’i prezida Rajoelina) no nahavoafidy azy ho depiote ny taona 2014, nefa noho ny korontana teo amin’i Andry Rajoelina sy Hery Rajaonarimampianina dia nisafidy ny hiaraka amin’ity farany izy. Ireo voalaza eo ambony ireo ny heviny amin’izany. Nilaza koa ity depiote ity teo aloha teo fa raha toa ka tenenina fa tsy mety hiova ingahy Hery Rajaonarimampianina amin’ny fomba ataony io dia tsy hampifidy azy izy amin’ny taona 2018 io.
Mizara roa ny depiote mpomba ny fitondra amin’izao fotoana izao, ka ny tarika iray izay miaraka amin’ingahy Mahazoasy izay filoha lefitra avy any Antsiranana dia manohitra tanteraka ny hevitr’ingahy depiote Nicolas avy any Betroka izao.
Na izany na tsy izany nefa dia mazava ny resaka ao Tsimbazaza ao mahakasika ny mpomba ny fanjakana ireto fa ny vola ihany no mibaiko azy ireo. Raha vao mandeha ny malety dia miova avokoa ny fijerin’izy rehetra ao.
Dia ho hitantsika indray izany ity fe-potoana nomen’ingahy Nicolas ity ho an’ny fanjakana hanovany ny mpikambana ao amin’ny governemanta alohan’ny hanohizany ny fanonganam-panjakana izao.